ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို စပိန်တို့ ပထမဆုံး ရရှိဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၁၉)
1 Jul 2018 . 6:14 AM
ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းတစ်လျှောက် အာဖရိကမြေပေါ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး တောင်အာဖရိကနိုင်ငံက လက်ခံကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းမှာ အွန်လိုင်းကနေ ရုပ်သံကြည့်ရှုသူ အများဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး စံချိန်တင် (၉၄၂)သန်းကျော် ကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်။ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် သက်ဆိုင်ရာဇုန်အလိုက် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခြေစစ်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းပေါင်း (၁၉၇)သင်းအထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၂ ပြိုင်ပွဲနောက်ပိုင်း တိုက်ကြီး (၆)တိုက်က အသင်းတွေ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး သမုဒ္ဒရာပိုင်းဇုန်က နယူးဇီလန်အသင်း ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့လို့ ပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးအဆင့်ကို ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ တောင်အာဖရိကအသင်း တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့လို့ ဝင်ခွင့်ခွဲတမ်း (၅)နေရာသာရရှိထားတဲ့ အာဖရိကဇုန်က အသင်းပေါင်း (၆)သင်းအထိ ပါဝင်လာခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် အာဖရိကကိုယ်စားပြုအသင်း အများဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ရှင်တောင်အာဖရိကအသင်း အုပ်စုအဆင့်ကနေ ထွက်ခဲ့ရလို့ အိမ်ရှင်အသင်းတွေထဲမှာ ပထမဆုံးအုပ်စုကထွက်ရတဲ့ အသင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေထဲမှာ ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှူး ဆွာရက်ဇ် ဂါနာအသင်း သေချာပေါက်ဂိုးရမယ့် အခွင့်အရေးကို လက်နဲ့ပုတ်ထုတ်ခဲ့လို့ တိုက်ရိုက်အနီကတ်နဲ့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်က ဟာသဆန်ဆန်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်မှာ ဥရုဂွေးအသင်းက အနိုင်ရရှိခဲ့လို့ ဆွာရက်ဇ်ဟာ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ Tiki-Taka ကစားဟန်နဲ့ ခေတ်တစ်ခေတ်ကို ထူထောင်ခဲ့တဲ့ စပိန်အသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲရဲ့ရေပန်းအစားဆုံး ဂျာမနီအသင်းနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး စပိန်အသင်းက (၁-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အဖြစ် ကစားခဲ့တဲ့ နယ်သာလန်အသင်းနဲ့ ဥရုဂွေးအသင်းတို့ ပွဲစဉ်မှာတော့ အပြန်အလှန်သွင်းဂိုးတွေနဲ့ နယ်သာလန်အသင်းက အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဗိုလ်လုပွဲကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တယ်။
ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် ကစားခဲ့တဲ့ စပိန်အသင်းနဲ့ နယ်သာလန်အသင်းတို့ပွဲစဉ်ဟာ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့ပြီး စပိန်ကွင်းလယ်လူ အလွန်ဆိုရင်ဘတ်ကို ကန်ခဲ့တဲ့ နယ်သာလန်ကွင်းလယ်လူ ဒီဂျောင်းကို မထုတ်ပယ်ခဲ့လို့ ကွင်းလယ်ဒိုင်အပေါ် အပြင်းအထန် ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ မိနစ် (၉၀)အတွင်း သရေကျနေခဲ့လို့ အချိန်ပို ဆက်လက် ကစားခဲ့ရပြီး အချိန်ပို (၁၁၆)မိနစ်အရောက်မှာ အင်နီယေစတာရဲ့ သွင်းဂိုးကြောင့် ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုဖလားကို စပိန်တို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုင်မြောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။ နယ်သာလန်အသင်းကတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲကို (၃)ကြိမ်မြောက် တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး (၃)ကြိမ်စလုံး ဒုတိယနေရာနဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရပါတယ်။ စပိန်တို့ရဲ့ ခေတ်တစ်ခေတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကာလအပိုင်းအခြားဖြစ်ပြီး ယူရို-၂၀၀၈ ပြိုင်ပွဲ၊ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲနဲ့ ယူရို-၂၀၁၂ ပြိုင်တွေမှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့လို့ ပြိုင်ပွဲကြီး (၃)ခုကို ဆက်တိုက်ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အပိုင်း (၂၀)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ အကျဉ်းချုပ်
Host Country – South Africa
Dates – 11 June – 11 July
Teams – 32 (from6confederations)
Venue(s) – 10 (in9host cities)
Champions – Spain (1st title)
Runners-Up – Netherlands
Goals Scored – 145 (2.27 per match)
Attendance – 3,178,856 (49,670 per match)
Top Scorer(s) – Diego Forlán (Uruguay), Thomas Müller (Germany), Sneijder (Netherlands), David Villa (Spain) – (5 goals each)
Best Player – Diego Forlán (Uruguay)
Best Young Player – Thomas Müller (Germany)
Best Goalkeeper – Iker Casillas (Spain)
Photo:SI, Reuters, Pinterest, Scoopnest
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၁၉)
ကမ်ဘာ့ဖလားသမိုငျးတဈလြှောကျ အာဖရိကမွပေျေါမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈပွီး တောငျအာဖရိကနိုငျငံက လကျခံကငျြးပခှငျ့ရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားသမိုငျးမှာ အှနျလိုငျးကနေ ရုပျသံကွညျ့ရှုသူ အမြားဆုံးပွိုငျပှဲဖွဈပွီး စံခြိနျတငျ (၉၄၂)သနျးကြျော ကွညျ့ရှုခဲ့ကွတယျ။ ၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲအတှကျ သကျဆိုငျရာဇုနျအလိုကျ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့တဲ့ ခွစေဈပှဲကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးပေါငျး (၁၉၇)သငျးအထိ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၈၂ ပွိုငျပှဲနောကျပိုငျး တိုကျကွီး (၆)တိုကျက အသငျးတှေ ပါဝငျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဖွဈပွီး သမုဒ်ဒရာပိုငျးဇုနျက နယူးဇီလနျအသငျး ခွစေဈပှဲအောငျမွငျခဲ့လို့ ပွိုငျပှဲနောကျဆုံးအဆငျ့ကို ပါဝငျခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။ အိမျရှငျဖွဈတဲ့ တောငျအာဖရိကအသငျး တိုကျရိုကျယှဉျပွိုငျခှငျ့ရခဲ့လို့ ဝငျခှငျ့ခှဲတမျး (၅)နရောသာရရှိထားတဲ့ အာဖရိကဇုနျက အသငျးပေါငျး (၆)သငျးအထိ ပါဝငျလာခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ အာဖရိကကိုယျစားပွုအသငျး အမြားဆုံးပါဝငျခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။
အိမျရှငျတောငျအာဖရိကအသငျး အုပျစုအဆငျ့ကနေ ထှကျခဲ့ရလို့ အိမျရှငျအသငျးတှထေဲမှာ ပထမဆုံးအုပျစုကထှကျရတဲ့ အသငျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ကှာတားဖိုငျနယျပှဲစဉျတှထေဲမှာ ဥရုဂှေးတိုကျစဈမှူး ဆှာရကျဇျ ဂါနာအသငျး သခြောပေါကျဂိုးရမယျ့ အခှငျ့အရေးကို လကျနဲ့ပုတျထုတျခဲ့လို့ တိုကျရိုကျအနီကတျနဲ့ ထုတျပယျခံခဲ့ရတဲ့ဖွဈရပျက ဟာသဆနျဆနျဖွဈခဲ့ပွီး ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျမှာ ဥရုဂှေးအသငျးက အနိုငျရရှိခဲ့လို့ ဆှာရကျဇျဟာ နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးအတှကျ သူရဲကောငျးတဈဦးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့မှာ Tiki-Taka ကစားဟနျနဲ့ ခတျေတဈခတျေကို ထူထောငျခဲ့တဲ့ စပိနျအသငျးဟာ ပွိုငျပှဲရဲ့ရပေနျးအစားဆုံး ဂြာမနီအသငျးနဲ့ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့ခဲ့ပွီး စပိနျအသငျးက (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ အခွားဆီမီးဖိုငျနယျပှဲစဉျအဖွဈ ကစားခဲ့တဲ့ နယျသာလနျအသငျးနဲ့ ဥရုဂှေးအသငျးတို့ ပှဲစဉျမှာတော့ အပွနျအလှနျသှငျးဂိုးတှနေဲ့ နယျသာလနျအသငျးက အနိုငျရရှိခဲ့ပွီး ဗိုလျလုပှဲကို တကျလှမျးနိုငျခဲ့တယျ။
ဗိုလျလုပှဲအဖွဈ ကစားခဲ့တဲ့ စပိနျအသငျးနဲ့ နယျသာလနျအသငျးတို့ပှဲစဉျဟာ ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျခဲ့ပွီး စပိနျကှငျးလယျလူ အလှနျဆိုရငျဘတျကို ကနျခဲ့တဲ့ နယျသာလနျကှငျးလယျလူ ဒီဂြောငျးကို မထုတျပယျခဲ့လို့ ကှငျးလယျဒိုငျအပျေါ အပွငျးအထနျ ဝဖေနျခဲ့ကွပါတယျ။ မိနဈ (၉၀)အတှငျး သရကေနြခေဲ့လို့ အခြိနျပို ဆကျလကျ ကစားခဲ့ရပွီး အခြိနျပို (၁၁၆)မိနဈအရောကျမှာ အငျနီယစေတာရဲ့ သှငျးဂိုးကွောငျ့ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုဖလားကို စပိနျတို့ ပထမဆုံးအကွိမျ ကိုငျမွောကျခှငျ့ရရှိခဲ့တယျ။ နယျသာလနျအသငျးကတော့ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲကို (၃)ကွိမျမွောကျ တကျရောကျနိုငျခဲ့တာဖွဈပွီး (၃)ကွိမျစလုံး ဒုတိယနရောနဲ့သာ ကနြေပျခဲ့ရပါတယျ။ စပိနျတို့ရဲ့ ခတျေတဈခတျေဖွဈခဲ့တဲ့ ကာလအပိုငျးအခွားဖွဈပွီး ယူရို-၂၀၀၈ ပွိုငျပှဲ၊ ၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲနဲ့ ယူရို-၂၀၁၂ ပွိုငျတှမှော ဗိုလျစှဲခဲ့လို့ ပွိုငျပှဲကွီး (၃)ခုကို ဆကျတိုကျဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးအသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာဖွဈပွီး အပိုငျး (၂၀)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .
၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ အကဉျြးခြုပျ